Warshadda Warshadda iyo Warshadda Shiinaha ee xarigga iska leh nikkel TANKII
Silig iska caabin nikkel daahir ah
Siligga nikkel saafi ah wuxuu leeyahay astaamaha xoogga wanaagsan heerkulka sare, baaxad wanaagsan, tabinta kuleylka oo liidata iyo iska caabbinta sare.
Fiilo: Bartilmaameedyada Sputter, pellets uumiga, gariiradda jaangooyaha oo ku jira furayaasha iftiimaya ee matoorada naaftada; silig litz oo loogu talagalay socodsiinta hadda ka hooseysa heerkulka sare iyo deegaannada gardarada leh, Qalabka hore ee wax -ka -qabashada siligga khafiifka ah, Ni silig mesh, Buufinta Kuleylka, Lakabka dahaarka ee ilaalinta daxalka ee alkalis; milixda lagu buufiyo; cusbo la dhalaaliyay iyo kiimikooyin yaraynaya; lakabka dahaarka ee iska caabinta heerkulka sare; ilaalinta daxalka ee heerkulka sare; lakabka dahaarka ee darbiyada xuubka ee awooda korontada
Ka shaqaynta taariikhda
Si aad u soo saarto silig, taargooyinka qaro weyn ee duuban ee 6 mm ayaa la gooyaa 6 mm ulaha ballaaran. Ulaha waxaa hore loogu xardhay. Dabadeed siligga cayriin ah waxaa loola dhaqmi karaa si la mid ah sida siligga kulul ee la duubay oo ay soo saarto bir -dhalaalid. si waafaqsan, siligga waxaa loo jiidayaa cabbirrada la rabo iyada oo loo marayo sawir qabow iyo dhexda dhexe.
Darajo Ni200, Ni201, Ni205
Cabbirka silig φ .10.1-12mm
Astaamaha Awood farsamo oo wanaagsan, iska caabinta daxalka iyo xoogga adkaysi kulaylka oo sarreeya. Waxay ku habboon tahay samaynta aaladaha faaruqinta, qaybaha qalabka elektarooniga ah, iyo shaandhooyinka wax soo saarka kiimikada ee alkalis adag.
Codsiga raadiyaha, ilayska korontada, waxsoosaarka mishiinada, warshadaha kiimikada, waana qalab dhisme muhiim u ah qalabka elektiroonigga ah ee maran.
Halabuurka Kiimikada (Wt.%)
Fidinta, %, Min
Cabbirka iyo Dulqaadka (mm)
Wuxuu ahaa 0.006 ±
1). Xaaladda: M = Jilicsan.1/2Y = 1/2Hard, Y = Adag
2). Haddii aad leedahay dalab iska caabin ah, sidoo kale waan kuu dhalaalinaynaa.
Hore: Silsiladda Manganin
Xiga: Qaybaha kululaynta Bayonet
Dhaawaca Helical Nickel Chromium Wireless Resistance
0Cr27Al7Mo2 1Cr13Al4 0Cr25Al5 fecral koronto h ...
Daawaha FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 CrAl heerkulka sare ...
Silsilad Alxanka Gaaska Nadiif ah
Midabka Dahabka ah Resistohm 145 Wire TK1 daawaha fecral
Siligga Resistance Wire Nichrome 70/30 Kuleylka ...
Bayonet kululeeyaha, Fur gariiradda kululeeyaha, Bayonet Element Element, Nickel Wire, Wire Resistance, Qaybaha kululaynta,